3D ပရင်တာ၊ လေဆာစက်၊ 3D ထွင်းထုခြင်း - Ecubmaker
4 လဲလှယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ module တွေ
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများပေါ်တွင်မည်သည့်ပုံစံများ, ပုံရိပ်, ဒီဇိုင်းထွင်း
လျော့နည်းဝိုင်ယာကြိုးစွန့်ပစ် & အဘယ်သူမျှမအရောင်ရောစပ်
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအပေါ် Carve, စက်မျက်နှာပြင်
သင်အလိုရှိသည့် Advance Features များရှိသည်
အလိုအလျောက် level ကို
4-in-1 အချပ် Software များ
TOYDIY ၏ 4-in-1 3D Printer သည်လုပ်နိုင်သည်
နောက်ထပ် Functions များ၊ Explore လုပ်ရန်နောက်ထပ် Options များ
အသုံးပြုသူများကို 5000+ တစ် ဦး အသိုင်းအဝိုင်းများကချစ်ကြတယ်
အခြားပရင်တာများအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးအချို့သောအသုံးအနှုန်းများကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်၊ ဤအရာသည်သင်ယူရန်နှင့်သင်ယူရန်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး 3D ပရင်တာဖြစ်သည်ဟုလူတို့အားကျွန်ုပ်ပြောပြသည်။ တည်ဆောက်ရန်နေရာသေးငယ်လွန်းလျှင်ပိုကြီးသည့်ပရင်တာသို့တက်လှမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ချစ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီစက်အများကြီး။
ကျွန်ုပ်၏ ToyDIY4သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
GoPro Mount လက်နက်များသည် ၁၅% သော infill နှင့်အနည်းငယ်ပျက်စီးလွယ်သောကြောင့် ၅၀% အထိမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
လေဆာရောင်ခြည်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်လုပ် iPad တွင်ရပ်နေသည်။
ဒီနေရာမှာငါစီစဉ်ပြီးထုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့သေးငယ်တဲ့ gadget အချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Radiator ရဲ့ထိပ်မှာထားဖို့ extension ကြိုးကလစ်များ။ စောင်းသစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုရယ်စရာကောင်းသောပန်းကန်သည်ကြွက်သားနာကျင်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်ဖြစ်သည်၊ သင်ကသင့်လျော်သောပန်းကန်ထောင့်ရှိနာကျင်သည့်နေရာကိုနှိပ်နယ်ပေးသည်။
ပတ်ပတ်လည်လျှပ်စစ် box တစ်ခုလိုအပ်ရုံတစ်ခု print ထုတ်။ လိုအပ်သောဝိုင်ယာကြိုးကိုကိုယ်တိုင် တင်၍ ချချခြင်းအားဖြင့်ဖောင်တစ်ခုအားဖောင်တစ်ချပ်ကိုပုံနှိပ်ပေးသည်။ သံလိုက်အခြေစိုက်စခန်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအရာအားလုံးမျှအားထုတ်မှုနှင့်အတူကွဲကွာ။
ဂျနီဖာ Thorup Whitmer
Goldens Junkyard ခြံ
ဒါဟာလျင်မြန်စွာရောက်ရှိ praseembeled ။ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်အားလုံးပါ ၀ င်သောအရာများအားလုံးအပေါ်တွင်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အနုတ်လက္ခဏာကျွန်ုပ်သည် 3D ပရင်တာတစ်လုံးတည်းပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲဘက်နှင့် ပတ်သက်၍ နက်နက်နဲနဲလေ့လာသင်ယူရန်ပစ္စည်းများပိုမိုရှိရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ငါ YouTube တွင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်နှင့်သင် lazer ခေါင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်အလုပ်ကိုမြင်သည်အတိုင်း။
Bang on !! ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး 3D Printer ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ပြissueနာများစွာကိုမကြုံတွေ့ရပါ။ လုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုအကြောင်းကိုတစ်နာရီစီသိဖို့နာရီပေါင်းများစွာယူပါ။ SD ကဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောစာပုံးအားလုံးပြီးပြီ။ ပြီးတော့လုံးဝပြောလို့ရတယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။
နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသွားမီကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါသည်။ ငါ CNC ကြိတ်ခွဲစဉ်အတွင်းရှုပ်ထွေးမှုများအတွက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကသင့်လျော်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့်အတူခဏအတွင်းပြန်ကြား။ ကောင်းလိုက်တာ။
အခုထိငါပုံမှန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေပြီးနာရီ ၃၀ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေတယ်။ ပရင်တာက Amazon ကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်လာပြီးသိပ်ကိုထုပ်ထားတယ်။ ငါသေတ္တာကိုဖွင့်လှစ်သည့်အခါဘာမျှမပျက်စီးခဲ့ကဖြည်ရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးရန်အရာသည်အမြှုပ်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးခေါင်းအားလုံးသည်ပူဖောင်းထုပ်ခြင်းတွင်ရှိသည်။ ဖွင့်ရန်လည်းလွယ်ကူသည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Molly ကြောင်ကွယ်လွန်သွားပြီ ငါသူမအတွက်အောက်မေ့ဖွယ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုပြီး ToyDIY ၏လုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒီပရင်တာကိုပြnoနာမရှိဘဲသုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါကျောင်းစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုရန် 2020 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကဒီဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လေဆာခြင်းနှင့် CNC ထွင်းထုခြင်းအကြောင်းဘာမှမသိခဲ့ဘူး။
ငါ 3D print head နှင့်အတူတစ်လသို့မဟုတ်ဒီတော့ပြanနာတစ်ခုရှိခဲ့အလွန်အလျင်အမြန်အစားထိုးစေလွှတ်ခဲ့သည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့ပရင်တာ! ယခုအချိန်အထိဖိုင်တွဲတစ်ခုတည်းကိုသာပြုလုပ်ရုံသာမကဗီဒီယိုများကဲ့သို့ဖိုင်ကိုဖွင့ ်၍ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်မှငါလေဆာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုစမ်းကြည့်ပါ့မယ်။
ငါအမြဲတမ်း 3-in-1 ပရင်တာ (FDM ပုံနှိပ်ခြင်း၊ CNC ထွင်းထုခြင်းနှင့်လေဆာရေးထွင်းခြင်းနှင့်အတူ) လိုချင်ခဲ့သော်လည်းဤစက်အများစုသည်အလွန်စျေးကြီးကြသည်။ ဒါကြောင့်ငါကတခြားသူတွေထက်အများကြီးစျေးသက်သာတဲ့ 4-in-1 ပရင်တာကိုတွေ့တော့အဲဒါကိုသွားပြီးစက်အကြောင်းငါတွေးမိသည်။ ထိုအခါငါဝယ်ယူနှင့်အတူတော်တော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
Ecubmaker 4-in-1 ပရင်တာသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာထုပ်ပိုးထားသည်။ သေတ္တာကြီးအတွင်း၌သေးငယ်ပြီးတံဆိပ်ကပ်ထားသောသေတ္တာများအမြောက်အများရှိသည်။ ဤသေတ္တာများထဲတွင်သင် tool tool ၄ ခု၊ နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးကိုင်ဆောင်ထားသည့်ကိရိယာနှင့်ကိရိယာများ / အစိတ်အပိုင်းများကိုတွေ့နိုင်သည်။ သေတ္တာကြီး၏အတွင်းပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောပရင်တာကိုယ်ထည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤပရင်တာသည်အနည်းဆုံးစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာလိုအပ်သော tool head နှင့်ပူးပေါင်းပြီးပုံနှိပ်ခြင်းကိုစတင်ပါ။ ပရင်တာမသုံးခင်ငါပရင်တာနှင့်၎င်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအသေးစိတ်လေ့လာချင်သည်။
ဒီစက်ကိုအသုံးပြုတာကများတယ်။ ဒါကြောင့်ငါက 3DPrinter ကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါမှာမရှိတော့ဘူး4function ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့အရည်အသွေးကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
အော်တို leveling လုပ်ဆောင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုပုံနှိပ်ရာတွင်အခက်အခဲများရှိခြင်းမှများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ အပူကိုစုပ်ယူသောနည်းပညာကြောင့်ပလက်ဖောင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပူလာသည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် 3D Printing ကိုပြီးအောင်ချက်ချင်းထုတ်ယူနိုင်တယ်။
ပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့၊ သူမတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲ၎င်းရဲ့ကြိုတင်တပ်ဆင်စက်ကိုပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဤအမျိုးအစားကိုပေးသောစက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
၎င်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အတွက်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ပါဝင်မှုသည်အလွန်ကြွယ်ဝသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မော်ဒယ်လ်ကို ecubware software ဖြင့်အလွယ်တကူတည်းဖြတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
ငါကဒီစက်ကို ၀ ယ်ဖို့လူတိုင်းကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းစက်ကိုအရမ်းဈေးသက်သာတယ်။
ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် အရာအားလုံးကြော်ငြာအဖြစ်ကောင်းစွာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒီတော့ဝေးလေဆာအများဆုံးထွင်းထုပြုတော်မူပြီးတကယ်ဒီသေးငယ်တဲ့စက်ကနေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချစ်၏။ ကျွန်ုပ်၏ပရင်တာကိုမပို့မီသက်တန့်မျှင်အချို့ကိုယူဆောင်လာသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခြင်းသည်ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်သင်ယူရန်အများကြီးရှိပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ့သား၏မွေးနေ့အတွက်ဝယ်ရန် 3d ပရင်တာကိုရှာခြင်း။ ဆုံးဖြတ်ရန်ရက်ပေါင်းများစွာယူ။ နောက်ဆုံး 4in1 ယူဆောင်လာ၏။ တကယ်ပဲထိုက်တန်! ကျွန်ုပ်၏သစ်သားသော့ခတ်အချို့ကို 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လေဆာရောင်ခြည်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါလေဆာရောင်ခြည်အသုံးပြုရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ငါအပိုကာကွယ်မှုအဘို့အကြှနျုပျ၏ပရင်တာကိုငါ့ကားဂိုဒေါင်သို့ပြောင်းရွှေ့ပေမယ့်!
ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစီမံကိန်းကို Toydiy 4in1 ဖြင့်ပြီးပါပြီ။ အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူတကွစုဝေး။ ပြင်ဆင်မှုပြfailureနာကြောင့်အချို့သောပျက်ကွက်မှုဖြစ်သော်လည်းအထောက်အကူဖြင့်စကားပြောဆိုမှုအပြီးတွင်ပြုလုပ်သည်။ ယေဘုယျအားငါသည်ဤပရင်တာကိုချစ်။
Ecubmaker Set သည် Makers ၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။ Multi-functional 3D Printer ကိုတီထွင်ရန်ရှေ့သို့တက်လှမ်းနိုင်သည့်အစောဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် EcubMaker သည်၎င်း၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စံအရည်အသွေးအတွက်ချီးကျူးခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့သည် Fantasy ကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့် desktop 3D printer အမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Fantasy စီးရီးတွင်အောင်မြင်မှုရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်မှာတစ်ခုခုတီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။ တီထွင်သူများသည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောစက်များစွာရှိသည်။ စက်ကိုစက်သို့ပြောင်းရန်ငွေနှင့်အချိန်ကိုချွေတာနိုင်သကဲ့သို့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ပစ်မှတ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် TOYDIY 4-in-1 အမည်ရှိကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 4-in-1 3D Printer ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ FDM တစ်ခုတည်းအရောင်၊ FDM နှစ်မျိုးသုံး 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လေဆာထွင်းထုခြင်း၊ အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်္ဂါရပ်များဖြင့် CNC ထွင်းထည်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် R&D အဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင် ၁၀ ယောက်ကျော်ရှိသည်။ သူတို့အားလုံးသည်သာမန်စားသုံးသူများအတွက်သာမန်စားသုံးသူများအတွက်တစ်ခုခုတီထွင်ရန်အိပ်မက်မက်ကြသည်။ သူတို့ကကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်သုံးလို့ရမယ့်အရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်မိဘများသို့မဟုတ်ပင်စင်စားဝါသနာရှင်များဖြစ်သည်။ TOYDIY 4-in-1 သည်သူတို့၏ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုကိုပြသရန်အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် All-in တစ်ခုဆော့ဝဲလ်ကိုတီထွင်ခြင်းကသူတို့အတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့ခက်ခဲသောအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုအချိန်တွင် TOYDIY သည် 3D ချစ်သူများ၏နှလုံးသားကိုအမြစ်တွယ်စေသောအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သော multi-tool 3D Printer တစ်ခုဖြစ်သည်။
3D ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ဆက်လက်ပံ့ပိုးရန်နှင့်၎င်း၏တိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရာနှုန်းပြည့်ပေးဆပ်မည်ဟုကတိပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူ၏ဘ ၀ ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပါလာပါစေ။